“Haddii aan Real Madrid ka sameysan karin sidaan rabo waan isaga tagayaa” – Zidane – Gool FM
“Haddii aan Real Madrid ka sameysan karin sidaan rabo waan isaga tagayaa” – Zidane
(Spain) 18 Maajo 2019. Zinedine Zidane ayaa xaqiijiyay inuu yahay shaqsiga mas’uulka ka ah inuu go’aan ka gaaro qaab ciyaareedka kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Macalinka reer France ayaa dhinaca kale tilmaamay suurtagalnimada ah inuu ka tagi doono kooxda hadii uusan ka sameyn karin sida uu rabo.
Hadalkan kasoo yeeray tababare Zinedine Zidane ayaa wuxuu imaanayaa kaddib markii uu kasoo muuqday shir jaraa’id maanta oo sabti ah, kahor kulankooda ugu dambeeya ee horyaalka La Liga ay maalinta barito kula ciyaari doonaan Real Betis.
Zidane ayaa ugu horeyn la weydiiyay su’aal ahayd goolhaayaha koowaad iyo kan labaad ee kooxda wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Waxaan arintaas ka hadli doonaa marka uu bilaawdo xili ciyaareed soo socda, waxaan sheegi doonaa cida noqon doonta goolhaayaha koowaad iyo labaad”.
“Waa go’aankeyga, waana wax sida biyaha oo kale isaga cad, sababtoo ah haddii aan kooxdeyda ka sameysan karin sidaan rabo waan isaga tagayaa”.
“Wax walba way iska cadahay, waxaa jira dad ka shaqeeya qandaraasyada, waana wada shaqeynaa, laakiin ciyaartoyda ka qeyb qaadaneysa shaxda koowaad iyo kuwa kooxda ka tagi doono, waxay noqon doontaa wax aniga ii gaar ah”.
Ugu dambeyn Zinedine Zidane ayaa iska diiday inuu ka hadlo in xidigaha Keylor Navas iyo Gareth Bale ay sii joogi doonaan kooxda iyo inkale wuxuuna yiri:
“Waxay nagala qeyb gali doonaan kulanka bari, waxaa jiri doona isbaddalo, lakiin ma aqaano haddii uu noqon doono kulankooda ugu dambeeyay iyo hadii kale”.
Muxuu ahaa hadalkii uu Cristiano Ronaldo ku yiri ciyaartoyda Juventus kadib ku dhawaaqistii bixitaanka Massimiliano Allegri?